त्यो नेपाली सैनिक विद्रोह - Nayapul Online
प्रकाशित मिति : Tuesday, August 14, 2018 nayapulonline
विश्वमा सिपाही तथा सैनिक विद्रोहका घटनाक्रमहरुको फेहरिस्त धेरै लामो छ । तर नेपालमा त्यस्ता भिषण प्रकृतिका सैनिक विद्रोह भएको प्रमाणहरु भेटिदैनन् । तर बेलाबखतमा त्यस्ता विद्रोहहरु भने भएको इतिहासहरुमा भेटिन्छ । ‘नेपालको महाभारत’ को ‘सन्तानब्बे साल पर्व’ खण्डमा भीमसेन थापाको बेलातिर भएको सिपाही विद्रोह भएको भन्ने कुरा उल्लेख छ ।
भीमसेन थापाको समयमा शासकहरूले सिपाहीले जागिरेको रूपमा खाएको जमीनमा आँखा लाउँदै रैबन्दी गरेर सिपाहीलाई नगद तलब दिएर सरकारी आम्दानी बढाउने योजना बनाएकोले वार्षिक पजनी समेत नगरेको बुझेपछि आठ हजार सिपाही विद्रोहमा उत्रिएका थिए । विद्रोही सिपाहीहरूले १८९७ असारमा टुँडिखेलको बाटो हिंडेका रेजिडेन्टका सिपाहीहरूलाई बन्दूकको कुन्दैकुन्दाले ठटाएर घाइते पारे । रातमा झ्मझ्म पानी पर्न लाग्दा विद्रोही सिपाहीहरू अंग्रेजको कोठी लुटेर रेजिडेन्टलाई खेद्ने, मार्ने भनेर उठे । तर, रेजिडेन्ट भागिसकेकाले उनीहरू फर्केर नारायणहिटीमा चौतरिया पुष्कर शाहको घरमा पसे । त्यहाँ कोठा–चोटा चहारेर सारा मालसामान बर्बाद बनाए । त्यसपछि इन्द्रचोकको रङ्गनाथ गुरुज्यूको घरमा पुगेर ‘तिम्रा रैबन्दी गर्ने पुस्तक, पात्रा यिनै हुन्’ भन्दै बाहिर नालामा बगाइदिए । रणजङ्ग पाँडे, कुलराज पाँडे, कुलवीर पाँडे, प्रसादसिंह बस्नेत लगायतका घरमा पनि उधुम मच्चाए । भारदारहरूले भागेर ज्यान जोगाए । राजा राजेन्द्रले आफैं गएर ‘साविक जागीर–जगा थामिनेछ, तिमीहरूको थमौती भयो’ भनेपछि मात्र त्यो विद्रोह शान्त भएको कुरा केहि इतिहासहरुमा भेटिन्छन् ।
त्यसबेलाको घटनाक्रमको सानो अंश :
“अ‍ैले श्री ५ सर्कार टुंडीखेल पल्टनका कवायत्मा पाउ लाग्नु भयाको छ, सवारी फिरेपछि अरज गरी आउला त अ‍ैले जा भनि मुन्सीजीलाई मेरा तर्फबाट सलाम भनि दीनु भन्या कुरा गर्दा बढिया भनि चपरासी गयो, साझका वषतमा सवारी र्फियापछि चपरासी आयाको कुरा मुन्सी लक्ष्मीदासले हजुरमा अरज गर्दा अब केही कुराको हंगामा छैन आज सबै पल्टनलाई ली फिरंगी छाउनीको बाटो गरी बालाज्यु पुगी म आयां साहेबलाई अब केही कुराको खौफ छैन सबै रफा भयो, साहेबले दस्तुर माफीक् हवा षान जानु भनि हुकुम् भयोको छ भनि कप्तान मुन्सी पाउ प्यादा लाई रजिडंसी कोठीमा पुगी पहीले श्री ५ सरर्कारका तर्फबाट षैरहफियत सोधन्या काम गरी काजी रणजङ्गबाट पनि बहुत बहुत सलाम भन्याको छ मीजाज सोधेको छ भन्या कुरा गर्दा– ३”
रजिडंट साहेबले भनेको
दरबारमा सबै आनन्द हुनुहुन्छ भनि सोधनि गर्दा– ३
कप्तान मुन्सीले भनेको
सबै आरोग्य साथ हुनुहुन्छ भन्या कुरा गरी हुकुम बमोजीम सीपाहीहरूले हंगामा मौकुफ् भयो साहेबले दस्तुर बमोजीम हवा षान जानु केही सदैह छैन भनि सर्कारबाट हुकुम भयाको छ– ४”
सम्वत १८९७ साल मिति आषाढ वदी ११
रोज ६ का दीन श्रीकाजी रणजङ्ग पाडेका
तर्फबाट श्रीरजिडंट हाजसन साहेबका
(मुन्शीखाना, पोका नं. १४ बाट)
६७ वर्ष अघि पत्नीले पतिलाई यसरी चिठ्ठी लेख्थे !
महेन्द्रनगरमा जारी कर्फ्यू हट्यो, अवस्था सामान्य बन्दै